Apple waxay cusbooneysiisay 'AirPort Utility' qaabkeeda 1.3.6 | Wararka IPhone
Apple waxay cusbooneysiisay 'AirPort Utility' qaabkeeda 1.3.6
Waxaa jira isticmaaleyaal badan oo ka mid ah saldhigyada kala duwan ee AirPort kuwaas oo la il-darnaa dhibaatooyin kala-goynta tan iyo markii nooca iOS 13 lagu cusbooneysiiyay aaladaha shirkadda waana sababtaas kadib taxaddarro taxane ah oo ay sameeyeen Apple ay baytariyada iyo ayaa soo saaray nooca cusub ee 1.3.6 si loo wanaajiyo xasilloonida iyo amniga marka lagu daro xalinta dhibaatooyinka isku xirka.
Waa run in Apple dhinacyadan router-ka uu dhinac dhigay waxyar ka hor, laakiin tani sabab uma aha in dadka isticmaala ee ku sii raaxaysta iyaga ay dhibaatooyin la kulmaan waana sababta tan cusbooneysiintan loo bilaabay, si hagaajinta waxqabadka iyo xalinta dhibaatada.
AirPort Utility waa loo cusbooneysiiyay dhammaan aaladaha inay si sax ah u shaqeeyaan. Hadda suurtagal ma noqon doonto in la yiraahdo Apple ayaa ka tagta isticmaaleyaasha leh alaab duug ah ama xitaa waqtigoodu dhammaaday, wax aan had iyo jeer si joogto ah u maqalno iyo in kiisaskaas la muujiyey inaysan run ahayn. Nooca cusub ayaa diyaar u ahaa inuu soo dego saacado kooban sida ay sheegayaan warbixinadii ugu horreeyay waxay hagaajisaa xiritaanka lama filaan ah marka lagu daro xalka loogu daro dhibaatooyinka amniga ee kala duwan.
Sidoo kale waa run in qalabka router-yadaani xoogaa waa laga duugoobay marka la barbardhigo qaar ka mid ah router-yada aan maanta iibsan karno, laakiin tani maahan sabab loo joojiyo isticmaalkeeda haddii ay noo shaqeeyaan oo marar badan ayaan dhihi karnaa xitaa way ka fiican yihiin kuwa hawlwadeennada ... Taasi waa sababta Apple sidan u sameyso nooca cusbooneysiinta oo wali waxaa jira isticmaaleyaal badan oo adeegsada maanta. Nooca cusub ee firmware-ka ee ay sii deysay Apple ayaa lagu rakibi karaa iyadoo la adeegsanayo barnaamijka iOS AirPort Utility.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Apple waxay cusbooneysiisay 'AirPort Utility' qaabkeeda 1.3.6
Apple wuxuu bilaabayaa degel saxaafadeed cusub oo leh dhammaan faahfaahinta Apple TV +
Iibinta IPhone 11 waxay dhaaftay filashooyinka bilowga ah ee Apple